Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Niantso ny Minisitra G7 ny CEO CEO London Heathrow: sokafy ny lanitra!
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Heathrow: drafitra Quarantine ho an'ireo tonga avy any amin'ny toerana mafana COVID-19 mbola tsy vonona
Ny tale jeneralin'ny seranam-piaramanidina London Heathrow, John Holland-Kaye dia nanao antso avo ho an'ireo minisitra G7
"Amin'ny alàlan'ny G7 manomboka anio, ny minisitra dia manana fotoana hanombohana ny fanarenana maitso amin'ny alalàn'ny fanekena ny fomba hanohizana ny dia iraisam-pirenena soa aman-tsara ary hametrahana baiko ho an'ny solika maharitra fiaramanidina izay hampihena ny sidina. Izao no fotoana anehoan'izy ireo ny fitarihana manerantany. ”
London Heathrow dia niatrika fitakiana 15 volana nisesy noho ny fangatahana voageja, miaraka amin'ny isan'ny mpandeha mihena amin'ny 90% ambanin'ny ambaratonga voalohany tamin'ny 2019 - fahaverezan'ny mpandeha 6 tapitrisa mahery tao anatin'ny iray volana.
Iray volana taorian'ny nanandratan'ny governemanta ny famerenana ny fitsangatsanganana iraisampirenena ary nanome toky ny besinimaro izy ireo fa ny rafi-pitaterana fifamoivoizana miorina amin'ny risika dia hanokatra ny fivezivezena ambany, ny rafitra dia mbola tsy nahatratra izay nokasaina hatao.
Ny tsy faneken'ny minisitra hanome mangarahara momba ny angon-drakitra ao ambadiky ny fanapaha-kevitra sy ny tsy fampidirany ny «liste» maitso dia nanimba ny fahatokisan'ny mpanjifa.
Amin'ny famerenana manaraka ho an'ny governemanta UK hanombatombanana ny famerana COVID-19 amin'ny 28 Jonath, ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy miantehitra amin'ny siansa ary manomboka indray ny dia mankany amin'ny firenena tandindomin-doza toa an'i Etazonia, manadio làlana mankamin'ny dia tsy misy fetra ho an'ireo mpandeha vita vaksiny, ary manolo ny fitsapana PCR lafo vidy amin'ny fandehanan'ny sisin-tany ho an'ireo tonga atahorana ambany.
Amin'izao fotoana izao dia mampanantena ny Minisitra fa hanao laharam-pahamehana ny famohana ao an-toerana ary tsy misy daty mazava hamaranana ny fameperana ny dia, tsy maintsy ho avy ny drafi-panohanana efa voamarina ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany mikorontana sy tsy raharahaina. Ny sehatra dia mampiasa olona an'aliny manerana an'i Britain izay hanontany tena hoe inona no hitranga amin'ny asany sy ny fivelomany aorian'ny fahavaratra very iray hafa. Ny governemanta dia tokony hanome onitra kendrena ho an'io sehatra io, manomboka amin'ny fanamaivanana ny tahan'ny asa sy ny fanitarana ny teti-dratsy raha mbola mihidy hatrany ny dia.
Ny fanokafana ny dia lavitra transatlantika dia manankery any Angletera sy Etazonia ary raisinay ny fananganana ny vondron'olona mpiasan'ny dia.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, ireo tale jeneralin'ny American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, JetBlue, United Airlines ary Virgin Atlantika ary ny seranam-piaramanidina Heathrow dia nanatevin-daharana ny hery hanoherana ny lalànan'ny transatlantic. Ny fikarohana CEBR dia nampiseho fa ny mpandeha amerikanina an'i Heathrow dia nandany vola mihoatra ny £ 3 tapitrisa pounds manerana an'i Angletera tamin'ny taona 2019. I Britain pre-pandemie no toerana voalohany nalehan'ireo mpizahatany amerikana, saingy io toerana mitarika io dia atahorana ho voaroba ary ho very maina ny hetahetan'ny Global Britain. avy amin'i Frantsa sy i Italia, izay efa vonona hanokatra ny varavarany ho an'ireo mpandeha amerikana vita vaksiny amin'ny herinandro ho avy.
Ny mpitondra G7 dia tsy maintsy manararaotra ny fotoana hanatevin-daharana ny hery sy hiatrika ny iray amin'ireo fanamby lehibe atrehin'ny zanakay, ny fiovan'ny toetrandro. Mpitondra entana lehibe ao amin'ny fanjakana G7 dia nanolo-tena hanidina-zero manidina amin'ny 2050, na izany aza, tsy afaka mamita izany tanjona izany isika amin'ny alàlan'ny fampiakarana haingana ny fampiasana solika maharitra (SAF). Misy ny teknolojia - nandefa ny SAF voalohany i Heathrow tamin'ny herinandro lasa teo - saingy mila ny politikam-panjakana marina izahay hananganana fitokisana amin'ny fitakiana. Miantso ny mpitondra eran'izao tontolo izao izahay mba hanolo-tena hiombon-kevitra amin'ny fampiakarana ny mandAT amin'ny fampiasana SAF 10% amin'ny 2030, mitombo hatrany amin'ny 50% farafaharatsiny amin'ny 2050, ary ny mekanisma famporisihana ny vidiny izay nanomboka ny sehatry ny karbaona ambany hafa. Ny G7 dia tokony handray andraikitra manerantany amin'ny fananganana fiaramanidina net-zero, hanaiky SAF 10% farafaharatsiny ao amin'ny kaomina misy azy, ary hanangana fiaraha-miasa manerantany ho an'ireo izay miverina io faniriana io.